स्वास्थ्य पेजकोरोना विरुद्धको खोपः एक डोज मात्रै लगाए पुग्कोला त ? - स्वास्थ्य पेज कोरोना विरुद्धको खोपः एक डोज मात्रै लगाए पुग्कोला त ? - स्वास्थ्य पेज
काठमाडौंः एक डोज मात्रै लगाए पुग्ने कोरोना भाइरसविरुद्धको जोन्सन एण्ड जोन्सनको खोप सुरक्षित र प्रभावकारी देखिएको छ ।
फाइजर र मोदेर्नाको भन्दा जोन्सन एण्ड जोन्सनको खोप खर्च र भण्डारणका हिसाबले पनि किफायती देखिएको छ । यो खोप अघिल्ला दुई जस्तो फ्रिजरमा नभइर रेफ्रिजिरेटरमा भण्डारण गर्न मिल्छ । खोपलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने विषयमा शुक्रबार एफडिएका विज्ञहरु बैठक बस्दैछन् ।